Mahila Swasthya किन बिग्रिन्छ महिनावारी ? महिनावारी हुँदा के के कुरामा ध्यान दिने ?
मंगलबार, चैत ३१, २०७७ महिला स्वास्थ्य
काठमाडौं - सामान्यतया महिलाहरुको डिम्वाशयहरुवाट अण्डाहरु उत्पादन हुन्छ । ती डिम्वाशयहरुवाट एस्ट्रोजिन र पोजेस्टेरोन नाम गरेका हर्मोनहरु निस्कन्छन् । यी हर्मोनहरुको प्रभावले पाठेघरको भित्री तहमा हुने परिवर्तहरुको फलस्वरुप माहिनाको एक पटक महिनावारी वा रजस्वला हुन्छ ।
- यो विभिन्न भौगोलिक बातावरण अनुसार, जेनेतिक फाक्तोर अनुसार हरेक देश अनुसार फरक फरक हुन्छ। तर सामान्य रुपमा यो १३-१४ वर्ष देखी सुरु हुन्छ।
- महिनवारिको सुरुवाती दिनहरुमा महिनावारी गडबडी हुनु एकदमै सामान्य हो तर उमेर बढ्दै जाँदा गडबडी धेरै कारणले हुने गर्द्छ।
- यो समस्या सामान्य हो तर यदी अधिक मात्रमा भयो भने चाँही यो सामान्य होइन। धेरैजसो महिलाहरु यो सामान्य हो भनेर दुखाइ
- महिनावारी रोकने Pills ले हाम्रो शरीरमा उत्पादन भएको हार्मोनलाई त्यो समयमा जुन बेला हार्मोन निस्केर महिनावारी हुनुपर्छ त्त्यसलाई रोकेर अर्को हार्मोनलाई लम्बाईदिन्छ। Pills एकदुई पटक प्रयोग गर्दा खासै फरक पर्दैन तर यसलाई धेरै पटक प्रयोग गर्‍यो भने महिनावारीमा गडबडी, अर्को महिनावारीमा अत्याधिक रक्तश्राब र कहिलेकाही त बच्चा पाउन नसक्ने पनि हुनसक्छ।
- नेपालमा सामान्यता महिनावारि बन्द हुने उमेर भनेको ४८-५२ वर्ष हो। महिनावारि बन्द हुनु भनेको एउटा महिलालाई अब आमा बन्न पुगिसक्यो र अब उसको शरीरमा हर्मोने घट्ने क्रम सुरु हुनु हो। महिनावारी सुरु हुनु सामान्य भएजस्तै सुक्नु पनि सामान्य नै हो तर महिनावारि बन्द भएपछि अरु रोगहरु सुरुहुन्छ । मुटु रोग, हाड जोरनि र नशाको रोग, मधुमेह र अरु ।
उपत्यकामा थपिए ३ हजार ३४९ कोरोना संक्रमित ५८ मिनेट पहिले